Izindaba - Izindwangu Zendwangu Ephelele Yezokwelapha
Kunezingqimba ezi-2 kule ndwangu yezokwelapha ye-TPU.
Owokuqala yindwangu eyisisekelo. Indwangu engeyona eyokweluka.
Ingqimba engezansi ifilimu ye-TPU. Kwenza indwangu ukuthi ingabi nomoya futhi ingangeni manzi.
Ingqimba ye-TPU ethambile nenwebekayo ingakhuphula amandla okugqekeza futhi aluhlaza entweni.
1) Elwa namagciwane futhi alinobuthi
2) Ukuqina komoya okuphezulu kwemikhiqizo engenayo imali
3) Amanzi angenamanzi
4) Ukumelana kokushisa okuphansi okuhle kakhulu, kungenzeka kusetshenziswe ngaphansi kuka--22 ° c
5) Ubungani bemvelo futhi obungenabuthi, bungabikwa yi-microorganism kungakapheli iminyaka engama-3-5 lapho ungcwatshwa.
I-6) Umuzwa wesandla othambile futhi obushelelezi
1) Uma umusha kulo mkhakha, singakunikeza izeluleko zochwepheshe ezisuselwa kokuhlangenwe nakho kwethu kweminyaka engu-15. Ngaphezu kwalokho, singenza izincomo zokwengeza ezisezingeni eliphezulu kanye nabakhiqizi bomshini kuwe.
2) Ukucaciswa kungenziwa ngokuya ngezidingo zamakhasimende, kufaka phakathi indwangu eyisisekelo, umbala wendwangu eyisisekelo, ubukhulu bokushuba, ubukhulu kanye nombala wefilimu ye-TPU, ububanzi nobubanzi.
3) I-oda lesampula kanye nokuhleleka okuncane kuyamukeleka
4) Amasampula amahhala angathunyelwa kuwe ukubheka ikhwalithi, kepha kufanele ukhokhele imali yokuposa
inkampani yethu njengefekthri Yezindwangu Zokwelapha, uma udinga lokho pls xhumana nathi.